Ezinamacala wocingo - China Hebei Samsung Metal wocingo
Wire isefu ne ukuvulwa ezinamacala inika isebenzisa umoya kunye nokubiyelwa elungileyo. Ezinamacala wire kwesefu yenziwe Ukucofa steel wire carbon, electro okanye ashushu nkxu Isefu, ngoko zeplastiki wawutyabeka, okanye plain. Kokuba abunjiiweyo zibe kwiibhokisi neegabions - enye iimveliso wire kakhulu ethandwa kakhulu ekulawuleni izikhukhula. Ke amatye zifakwa kuyo. Yokubekwa neegabions ndakhe udonga okanye ibhanki emanzini nasemanzini. Ezinamacala wire kwesefu kwakhona nge welding, ibe kwesefu neenkukhu ezizalayo yenkuku kunye nezinye zeenkukhu ....
Supply Amandla: 3000 Qengqela / Rolls Inyanga nganye
Wire isefu ne ezinamacala lokuvula inika isebenzisa umoya kunye nokubiyelwa elungileyo. Ezinamacala wire kwesefu yenziwe Ukucofa steel wire carbon, electro okanye ashushu nkxu Isefu, ngoko zeplastiki wawutyabeka, okanye plain.
Kokuba abunjiiweyo zibe kwiibhokisi neegabions - enye iimveliso wire kakhulu ethandwa kakhulu ekulawuleni izikhukhula. Ke amatye zifakwa kuyo. Yokubekwa neegabions ndakhe udonga okanye ibhanki emanzini nasemanzini. Ezinamacala wire kwesefu kwakhona nge welding, ibe kwesefu neenkukhu ezizalayo yenkuku kunye nezinye zeenkukhu. Elidume kusetyenziswa iingcingo emva oluhlaza wawutyabeka, kunye neendleko na lincitshiswe. Kule minyaka idlulileyo, i-wire isefu ezinamacala ezenziwe ngocingo intsimbi kwalenza kuye kwasetyenziswa kwiingcingo, ukuzala unyanzeliso yokwakha.
Ngokutsho isicelo , siya kubonelela ucingo isefu kwezi ndidi zilandelayo:
Injongo General Wire elenze i;
Heavy Uhlobo Wire elenze i;
Wire isefu for Iingcingo.
Ukuvulwa ezinamacala wire ephothiweyo kwesefu ikakhulu isetyenziswa nokubiya ukukhanya yenkukhu, iifama, iintaka, imivundla kunye nemiluko yezilwanyana, abalindi umthi kunye nokubiya emyezweni, imigqomo zokugcina kunye isekela zokuhombisa iinkundla intenetya. Kwakhona isetyenziswe amalaphu wocingo ukuba unyanzeliso ukukhanya elaqhekeka yeglasi ubungqina kunye eziphathekayo yesamente, balutyabeka ebeka kweendlela, njl
Ukunenzela Iintlobo ezikhoyo ziquka:
• twist ngqo wire ezinamacala kwesefu
• reverse twist ezinamacala wire kwesefu
• kabini kukhuthazelwa ejijekileyo ezinamacala wire elenze
Kugudiswa of ezinamacala Wire kwesefu kunokuba:
• iqaqanjiswa emva nokuluka, iqaqanjiswa phambi ukwaluka,
• PVC camera Isefu
• ashushu-nkxu Isefu
• electro iqaqanjiswa
Jikelele Ukuchazwa ezinamacala Wire elenze i
Previous: Square wocingo
Okulandelayo: Chain Link Kucingo olubiyele
Isefu ezinamacala wocingo
PVC Camera ezinamacala wocingo
U Uhlobo Wire
Electro Isefu welding wocingo